AMISOM oo sheegtey inay dishay hogaamiye sare oo ka tirsan xoogaga Al-Shabaab – SBC
AMISOM oo sheegtey inay dishay hogaamiye sare oo ka tirsan xoogaga Al-Shabaab
Taliska ciidamada AMISOM ayaa shaaca ka qaaday in ay ku dileen dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay magaalada Muqdisho sarkaal sare oo ka mid ah horjoogayaasha xoogaga xarakada Al-Shabaab ee ka dagaalamaya qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho.
Warsaxaafadeed ka soo baxay Taliska ciidamada AMISOM oo nuqul ka mid ah la soo gaarsiiyey SBC uuna ku saxiisan yahay Taliyaha ciidamada AMISOM Maj. General Nathan Mugisha ayuu ku ku sheegtey in dagaaladii ka dhacay degmooyinka Hodan & Hawl-wadaag uu ku dhintey Burhaan Cali oo loo yaqaan Aayatulaahi oo uu ku sheegay in uu ahaa abaalduulka degmada Hawl-wadaag.
Warkan waxay ku qiratey AMISOM in dagaaladii ugu dambeeyey ay kaga dhinteen 2 askari halka 3 kalena ay kaga dhaawacmeen, waxaana uu sheegtey in ay dileen tiro ka mid ah wax uu ugu yeeray dagaalyahanada xagjirka ah sida hadalka uu u dhigey.
Maj. General Nathan Mugisha wuxuu ugu baaqay dadka magaalada Muqdisho inaanay ka waantoobaan socdaalka aan muhiimka aheyn ee ay ku tagyaan Suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho isagoo sabab dhigay si ay uga nabad galaan rasaasta la iswaydaarsanayo.
Mugisha waxaa kale oo uu sheegay in ciidamada DFKMG ah & kuwa AMISOM oo iskaashanaya inay bilaabeen dagaaladaasi oo uu ku sheegay inay yihiin kuwa ku aadan sugida amaanka, isagoo dadweynaha ka codsadey inay kala shaqeeyaan amaanka.